टोटनहृयामको फराकिलो जित, लुकासको हृयाट्रिक - VOICE OF NEPAL
टोटनहृयामको फराकिलो जित, लुकासको हृयाट्रिक
१ बैशाख २०७६, आईतवार ०२:५२ 114 ??? ???????
Photo Credit : प्रिमियर लिग
टोटनहृयामले इंग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा फराकिलो जित हात पारेको छ ।
शनिबार राति भएको खेलमा टोटनहृयामले हडर्सफिल्डलाई ४-० गोलअन्तरले पराजित गरेको हो । आफ्नै घरेलु मैदानमा भएको खेलमा टोटनहृयामको जितमा लुकास मोउराले हृयाटि्रक गोल गरे । त्यस्तै भिक्टोर वानयामाले एक गोल थपे ।
खेलको २४औं मिनेटमा नै भिक्टोरले गोल गर्दै टोटनहृयामलाई अग्रता दिलाएका थिए । २७औं मिनेटमा लुकासले गोल गर्दै टोटनहृयामलाई पहिलो हाफसम्म २-० गोलको अग्रता दिलाएका थिए ।
खेलको दोस्रो हाफमा लुकासले दुई गोल थप्न सफल भए । उनले ८७औं मिनेटमा र खेलको अतिरिक्त समयमा गोल गदै हृयाट्रिक पूरा गरेका थिए भने आफ्नो टिम टोटनहृयामलाई ४-० गोलअन्तरको जित दिलाए ।
जितसँगै टोटनहृयाम लिगको तेस्रो स्थानमा उक्लिएको छ । टोटनहृयामको ३३ खेलबाट ६७ अंक भएको छ । लिगको शीर्ष स्थानमा लिभरपुल रहेको छ । उसको ३३ खेलबाट ८२ अंक रहंदा दोस्रो स्थानमा रहेको म्यानचेस्टर सिटीको ३१ खेलबाट ८२ अंक रहेको छ ।
विश्वकप क्रिकेट : वर्षाक कारण भारत र न्युजिल्याण्डको खेल रद्द
स्वीडेनमाथि स्पेनको सहज जित
विराट कोहलीले प्रतिद्वन्दीप्रति देखाएको दयालु भाव,जसले सबैको मन जित्यो
दक्षिण अफ्रिकालाई अर्को झड्का, डेल स्टेन टिमबाहिर